Umaki: ukulahlwa » Martech Zone
Isikhathi sokufunda: 5 imizuzu Ngimangala njalo lapho ngihlangana neklayenti ngenqubo yokuphuma online futhi ukuthi bambalwa kangakanani kubo abaye bazama ukuthenga kusayithi labo! Elinye lamakhasimende ethu amasha belinengosi abatshalile kuyo imali eyizigidi futhi kuyizinyathelo ezi-5 ukusuka ekhasini lokuqala uye enqoleni yokuthenga. Kuyisimangaliso ukuthi noma ngubani ufinyelela kude kangaka! Kuyini ukulahlwa kwenqola yokuthenga? Kungenzeka
ULwesihlanu, May 6, 2016 ULwesihlanu, May 6, 2016 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Akungabazeki ukuthi ukuklama nokwenza umkhankaso we-imeyili wokulahla inqola yokuthenga osebenzayo usebenza. Eqinisweni, ngaphezu kwe-. Futhi inani le-oda elijwayelekile lokuthengwa ngama-imeyili okushiywa kwenqola liphakeme ngo-15% kunokuthenga okujwayelekile. Awukwazi ukukala izinhloso eziningi ukwedlula isivakashi esizeni sakho esengeza into enqoleni yakho yokuthenga! Njengabakhangisi, ayikho into ebuhlungu kakhulu kunokubona ukungena okukhulu kwezivakashi kuwebhusayithi yakho ye-ecommerce -
ISonto, Ephreli 3, 2016 ISonto, Ephreli 3, 2016 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 6 imizuzu Ukuzenzekelayo kokumaketha kuyigama eliyinkimbinkimbi elibonakala lisetshenziswa kukho konke kulezi zinsuku. Uma ipulatifomu yesoftware ingadala umlayezo kumamukeli nge-API yawo, ikhuthazwa njengokuzenzakalela kokumaketha. Ngokubona kwami, lokhu kungukungathembeki nje. Yize lokhu kungaba umsebenzi ozenzakalelayo ohambelana necebo labo lokumaketha, akusona neze isisombululo sokumaketha. Eqinisweni, ngikholwa ukuthi iningi lezixazululo zokuzenzekelayo zokumaketha ezitholakalayo - ngisho ezinkulu kunazo zonke - zinazo
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Hawu, le yi-infographic ebanzi futhi eyenzelwe kahle evela ku-BargainFox. Ngezibalo kuzo zonke izici zokuziphatha kwabathengi online, kukhanyisa ukuthi yini ngempela ethinta amazinga wokuguqulwa esizeni sakho se-e-commerce. Zonke izici zesipiliyoni se-e-commerce zihlinzekelwa, kufaka phakathi ukwakheka kwewebhusayithi, ividiyo, ukusetshenziswa, isivinini, ukukhokha, ukuphepha, ukulahla, ukubuyisa, ukusebenzela amakhasimende, ingxoxo ebukhoma, izibuyekezo, ubufakazi, ukuzibandakanya kwamakhasimende, iselula, amakhuphoni nezaphulelo, ukuthumela, izinhlelo zokwethembeka, imithombo yezokuxhumana, isibopho senhlalo, nokuthengisa.
Indima Yedatha Endleleni eku-inthanethi Yokuthenga
NgoLwesine, Juni 5, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Kunamaphuzu amaningi asendleleni yokuthenga lapho abathengisi bangaqoqa futhi basebenzise idatha ukuthuthukisa ulwazi lokuthenga futhi baphendule iziphequluli zibe ngabathengi. Kepha kunemininingwane eminingi kakhulu yokuthi kungaba lula ukugxila ezintweni ezingalungile bese uphambuka enkambweni. Isibonelo, ama-21% wabathengi ashiya inqola yabo ngenxa yokuthi inqubo yokuphuma ayisebenzi. Indlela yokuthenga inamaphuzu amaningi lapho abathengisi bangaqoqa khona